Mozean’ny sary: haneho an-dRabearivelo | NewsMada
Mozean’ny sary: haneho an-dRabearivelo
Tsy tapitra fa misy hatrany ireo vahiny manampahaizana, mpikaroka liana amin-dRabearivelo Jean-Joseph, mpanoratra malagasy tsy zovina amin’ny maro intsony. Ao ireo tsy naharitra fa niezaka sy niasa mafy, namadika ho nomerika ireo sanganasany ho fitahirizana izany. Iaraha-mahalala mantsy ny mety hahavery na hahasimba azy ireny raha mijanona an-taratasy fotsiny. Efa azo jerena tsara ao amin’ny “internet” ireo rehetra ireo.
Fantatra koa izao fa misy manampahaizana, antsoina hoe Claire Riffard, nanao fikarohana mikasika ny mombamomba ity mpanoratra malagasy ity. Hisy ny fizarana izany tantara, izay misy tsy fantatry ny maro, izany ny 2 mey izao, eny amin’ny Mozean’ny sary. Ao anatin’ny hetsika “Café-histoire”, fanao eny an-toerana, no hanatanterahana izany.
Heverina ho poeta afrikanina maoderina voalohany sady poeta malagasy voalohany nampiasa ny teny frantsay Rabearivelo Jean-Joseph. Nampiana-tena izy ary nampitombo ny talentany mikasika ny asa soratra tamin’ny fijerena ny zava-bitan’ireo mpanoratra frankofona. Nanana fahalalana goavana momba ny literatiora izy ary nahafehy ireo karazana asa soratra samihafa, toy ny tononkalo, ny tantara, ny teatra.
Nibahan-toerana tamin’ireo sanganasany ny nofinofiny sy ny alahelony ary ny fitiavana, amin’ny lafiny rehetra. Efa hain’ny maro ny tohin’ny tantarany, saingy mbola misy ireo tokony hambara, izay ho re mandritra ity “Café-histoire” ity.